November 2015 ~ Htet Aung Kyaw
Far from Home: 20 Years in Exile.
2:54 AM Htet Aung Kyaw No comments
I should mention that those books presented were/are printed in small editions only and are more or less available in Mae Sot and Chiang Mai only. Good places to buy them are Myat Thu's Aiya Restaurant and The Best Friend Library in Mae Sot, also the Best Friend Libraries in Chiang Mai and Nu PO Refugee camp. One can also try any used book store in Thailand. And finally: You can contact the publishers or the authors of the books, for I added all available information below each book.
Legal note: all excerpts on this page are published with explicit permission of the authors and/or publishers.
Sorry, von dieser Seite gibt es diesmal keine deutschsprachige Version, da von den Büchern keine deutschen Übersetzungen existieren.
In this book the author Htet Aung Kyaw tells us about his personal experiences asarebel fighter for the All Burma Students' Democratic Front (ABSDC), which he joined after the military crackdown on the uprising against the junta in August 1988, and of his life asareporter. He describes the inner conflicts between the different Burmese opposition groups as well as between the several social classes, eg. the problems and conflicts between those who decided to stay in Burma and to fight the military regime and those groups of educated people who fled the country and were accused of enjoyingahappy life outside Burma (mainly in the US, Norway and Australia) and just waiting for the others to topple the government. The book also offers several analyses and appraisals he has written over the years for several newspapers and magazines.
The first excerpt I chose isalittle bit unusal for the book. Why? Because it describes the clash of two different worlds when the rebel camp, where Htet Aung Kyaw was living at that time, was visited by an official of the International Refugee Committee (IRC). This woman had obviously no idea about the situation of these rebel fighters and their struggle to survive inacivil war area. One can only hope that this incompetence and stupid behavior by this IRC official is an exception and is not the rule!
(first chapter, from page5to 7)
...with an official from the International Refugee Committee (IRC). We passed the beautiful beaches and the popular Ban Laau Waterfall and finally reached the last Thai village, Khauung Yai (The Big Mountain) before our jungle camp. As we walked along the stream to our camp, the lady from the IRC, seeing the paper, plastics and food waste the students had thrown into the water, began complaining to me that we did not respect the enviroment.
When we stopped for lunch along the way, we washed our hands and dishes in the stream as we did every day. But the IRC official complained again and again that the ABSDF were not respecting enviromental law. Asaburmese rebel, I had never heard of enviromental law so I just smiled and paid no attention to her complaints. Once we arrived at the camp the, the IRC official exclaimed loudly when I offered her monkey curry for dinner. "You guys are killers. You have killed innocent wildlife. You are destroying the enviroment and nature," she shouted and spent the whole night crying.
We had no idea why she was so angry. The next morning, some students shotamonkey inabig tree just beside the camp and others used the monkey's hand bone asatool to make Yazin (cigarettes). "How can you complain? If you don't want us to kill monkeys, you should provide us with proper food, meat and milk - you are the donor," I told her.
She was really upset now but we just laughed as we didn't understand her feelings. I heard later that she wrote an official letter of complaint to the ABSDF headquarters saying that battalions 201 and 203 were destroying the enviroment and forest wildlife. If we did not stop, she wrote, the IRC would cut our aid...
...It was only when I arrived at Norway that I truly understood her feelings. There are many ducks in the public lakes and beaches but no one tried to catch them. I learned that there are many regulations to protect wild animals, but more importantly, no one thinks to kill these animals as no one is hungry here.
The second excerpt I chose is in strong contrast to the ivory tower views of the IRC offical and the brutal reality the rebel fighters were confronted with in their fight against the military government forces. (Still one can observealot of those so-called experts and starry-eyed-idealists running around at the Thai-Burmese border (and now also inside Myanmar) who have absolutely no idea what's going on.)
(second chapter, page 11)
...I don't know the exact number of casualities on our side, but I am certain that it was only one or two percent of those suffered by the Burmese troops. With my own eyes I saw hundreds of bodies, hand granades, helmets, ID cards, guns and knives of Burmese soldiers scattered in front of our frontline bunkers, inaplace we called the killing ground...
...Soldiers from the ASBDF's battalion 211 and the Karen National Liberatioon Army (KNLA) Special Batallion 101 led by colonel Taw Hla built heavily fortified bunkers along enemy lines whileanumber of normal bunkers were built along the river. We built three barbed wire fences in front of the fortified bunkers and three rows of bamboo traps...
...But unbelievably, although everything was in our favour, hundreds of Burmese soldiers tried to advance on the killing ground in wave after wave while their comrades ordered artillery shelling of our bunkers. Most of the fighting took place in the early morning and evening. All we needed to do was sit and wait in our bunkers until the enemy reached the last line of barbed wire, then pull the triggers of our AK-47s. It was so hard to understand why the waves of Burmese soldiers kept on coming in the killing ground even though they had seen hundreds of their comrades killed before them...
Htet Aung Kyaw,afreelance journalist and writer, was born 1964 in Tavoy in southern Burma. After the crackdown of the 8.8.88 democracy mass movement in Burma he joined the All Burma Students' Democratic Front (ABSDF). Later he worked asafield reporter for Oslo-based Democratic Voice of Burma (DVB). He still lives in Oslo, Norway.
Momentarily he is working on his new book about his life in the ABSDF , this time in Burmese, and prepares to publish it in Myanmar (or Burma, as he prefers to call his country). He also writes for the Irrawaddy Online Magazine.
Tel:+47 97 15 50 74 (mobile)
This book review is from .....
***(Copy from http://yanawa.blogspot.no/2013/03/books-from-and-about-burma.html)***
ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာလည်း စစ်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာလား
2:22 PM Htet Aung Kyaw No comments
The Voice Daily, 23-11-2015.
‘’တောင်ပေါ်မြေရဲ့ အခြားတဖက်မျက်နှာမှာ… ချယ်ရီတွေလည်း ယမ်းနံ့စွဲနေ’’ ဆုိုတဲ့ သီချင်းစာသားကုို အသက် ၄၀ တန်း လူလတ်ပုိုင်းအတော်များများ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ၁၉၈၀ နှစ်တွေက နာမည်ကြီး လှတဲ့ စုိုင်းခမ်းလိတ်နဲ့ စုိုင်းထီးဆုိုင်တုို့ရဲ့ ရှမ်းတောင်တန်းက စစ်ပွဲနောက်ခံသီချင်းတပုဒ်ပါ။ ဆင်ဆာကြီးစုိုး တဲ့ခေတ်မှာ ရေးရ၊ ဆုိုရတာဆုိုတော့ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း တည့်တည့်ပြောခွင့်မရခဲ့။
ဒါပေမဲ့ အခု ပွင့်လင်းခေတ်မှာတော့ ဒီသီချင်းက စစ်ဆန့်ကျင်ရေးသီချင်းတပုဒ်အဖြစ် Facebook ပေါ်မှာ နေရာ ယူထား လုိုက်ပါပြီ။ အရင်ခေတ်က တောင်ပေါ် မြေရဲ့အခြားတဖက်မျက်နှာမှာသာဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေဟာ အခုတော့ ဒီဖက်မျက်နှာ မြေပြန့်အထိပါ ရောက်လာနေပါတယ်။ အတိအကျပြောရမယ်ဆုိုရင် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပုိုင်း (SSPP/SSA) နဲ့ အစိုးရတပ်တွေကြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့တုိုက်ပွဲဟာ တဖြေးဖြေးနဲ့ ပြင်းထန်လာနေပြီး စစ်ပြေးဒုက္ခသည် တသောင်းကျော်အထိ ရှိလာနေပြီလုို့ သိရပါတယ်။
အစောပုိုင်းကတော့ အဲဒီဒေသမှာ လုံခြုံရေးမကောင်းလုို့ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နုိုင်တဲ့အကြောင်း ကော်မရှင်ရဲ့ကြေညာချက်ကုို သက်သေပြဖုို့အတွက် စစ်တပ်ဖက်က တုိုက်ပွဲဖေါ်တာလုို့ သတင်းတွေ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု ရွေးကောက်ပွဲပြီးလုို့ သီတင်းနှစ်ပတ်ခန့်ကြာပြီးတဲ့အထိ တိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေ ဆဲဆုိုတော့ ဒါဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနုိုင်တဲ့ ကျေးသီး၊ မှိုင်းရှုး၊ တန့်ယန်းနဲ့ ဟုိုပန်မြို့နယ်တွေ ကိစ္စတင်မဟုတ်တော့ပါ။
ဒါဟာ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် နုိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကုို အားစမ်းနုိုင်ဖုို့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ပုိုင်းက ထွင်လုိုက် တဲ့ တုိုက်ကွက်၊ တနည်းအားဖြင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးစီမံကိန်းတခုဖြစ်တဲ့ တနုိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) မှာ လက်မှတ်ရေထုိုးဖုို့ငြင်းဆုိုခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တွေကုို ပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ နမူနာ တုိုက်ပြနေတာ လုို့ ဝေဖန်သူတွေကပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ ရှမ်း-မြောက် (SSPP/SSA) နဲ့ ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးတပ်တော် (KIA) အပါဝင် အခုတုိုက်ပွဲဖြစ် နေတဲ့ တရုတ်နယ်စပ်က ငြိမ်း-အဖွဲ့အားလုံးနီးပါးဟာ ညောင်နှစ်ပင် အမျိုးသားညီလာခံကို တက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေ၊ အစိုး ရရဲ့လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်ကို ထောက်ခံခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေ၊ ၁၉၉၀ ပြည်လွန်နှစ်တွေ ကနေ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အထိ၊ အတိ အကျ ပြောရမယ်ဆုိုရင် န၀တ၊ နအဖ စစ်အစိုးရခေတ်တလျောက်လုံး ငြိမ်သက်နေပြီးမှ အခု အရပ်သားတပုိုင်း ဦးသိန်းစိန် အစိုးရခေတ်ရောက်မှ တုိုက်ပွဲပြန် ဖြစ်လာတဲ့ အဖွဲ့တွေပါ။
MPC နဲ့ NCA ဘာတွေ အားနည်းခဲ့သလဲ
ပြည်တွင်းစစ် နောက်ခံသမုိုင်းကို နည်းနည်းပြန်ကောက်ရမယ်ဆုိုရင် ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရပြီး ကတည်းက စတင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေဟာ စစ်တပ်ကြီးစုိုးတဲ့ မဆလ၊ န၀တ ခေတ်တွေမှာ မီဒီယာအပေါ် ရေးသားဖေါ်ပြခွင့် မရခဲ့ ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၈၈ နောက်ပုိုင်း ကျောင်းသားတွေ ထောင်နဲ့ချီတောခုို သွားပြီးနောက်မှာတော့ နယ်စပ်က စစ်ပွဲသတင်းတွေကို နုိုင်ငံတကာမီဒီယာ၊ အထူးသဖြင့် ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာပုိုင်းရေဒီယုိုတွေကတဆင့် ပြည်သူအတော်များများ သိခွင့်ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာပြီးနောက်မှာတော့ ဆင်ဆာဥပဒေကုို ဖျက်သိမ်းလုိုက်တဲ့အတွက် နယ်စပ် တကျောက တုိုက်ပွဲတွေ၊ လက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းတွေကုို ပြည်တွင်းထုတ် သတင်းစာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေမှာပါ ဖေါ်ပြခွင့်ရလာပါတယ်။ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ အဲဒီ လက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့တွေ အားလုံးနဲ့ သူတုို့အစိုးရက ဆွေးနွေးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ဆောင်ရွက်ပါ့မယ်လို့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ကတိပေးလုိုက်ပါတယ်။
ဒီလုို ကတိက၀တ်တွေနဲ့အတူ နုိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကုိုလည်း အစိုးရလက်အောက်ခံ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ (MPC) က များစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့ အားလုံးနီးပါးနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေး ပွဲတွေ ဆက်တုိုက်လုပ်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ နှောင်းပုိုင်း သုို့မဟုတ် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ သက်တန်းကုန်ခါနီးမှာတော့ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ တနုိုင်ငံလုံးဆုိုင်ရာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ထုိုးတဲ့အဆင့်အထိ ရောက်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ထုိုင်းနယ်စပ်ရှိ ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) နယ်မြေအခြေစုိုက် လက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့ ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပုိုင်း (SSA/RCSS) အဖွဲ့အပါဝင် ၈ ဖွဲ့ကသာ လက်မှတ်ထုိုးခဲ့ပါတယ်။ အခြား ထုိုင်းနယ်စပ် အခြေစုိုက် မွန်နဲ့ ကရင်နီ၊ တခါ တရုတ်နယ်စပ်တလျောက်ရှိ ၀၊ မုိုင်းလားနဲ့ အခုချိန်ထိ တုိုက်ပွဲ တွေဖြစ်နေဆဲ ကုိုးကန့်၊ တအောင်း၊ ကချင်နဲ့ ရှမ်း-မြောက်တွေက လက်မှတ်ထုိုးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
တနည်းအားဖြင့် ဦးသိန်းစိန်အစုိုးရရဲ့ ပထမ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ၅ နှစ်တာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ NCA ဟာ ထင် သလောက် အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါ။ ၂၀၁၁ ၀န်းကျင်အထိ တုိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေဆဲ KNU နဲ့ RCSS အပါအ၀င် ထုိုင်း နယ်စပ်ရှိ တောင်ပုိုင်းအဖွဲ့ ၈ ဖွဲနဲ့ အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထုိုးနုိုင်ခဲ့ပေမဲ့ အရင် ထောက်လှမ်းရေး ဟောင်း ဗုိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့် လက်ထက်က လက်မှတ်ထုိုးထားပြီးသား တရုတ်နယ်စပ်အခြေစုိုက် မြောက်ပုိုင်းအဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့လောက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်သလုိုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
သချာင်္သဘောအရဆိုရင်တော့ လက်မှတ်မထုိုးရသေးတဲ့ ၈ ဖွဲ့ကို ရအောင်လုိုက်ရင်းနဲ့ လက်မှတ်ထုိုးပြီးသား ၁၆ ဖွဲ့ ကုို ဆုံးရှုံးခံလုိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ အရင် ဆင်ဆာခေတ်က ဖုံးဖုံးဖိဖိလုပ်ထားနုိုင်ခဲ့တဲ့ တုိုက်ပွဲအသံ တွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ငုိုသံတွေဟာ ဒီနေ့မှာတော့ ဘယ်လိုမှ ဖုံးထားလုို့မရတော့ပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးတောင်းဆုိုသံတွေ ပုိုကျယ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် လက်ရှိအစိုးရနဲ့ တပ်မတော်က ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။
တုိုက်ပွဲတွေရပ်စဲဖုို့ ညွန်ကြားချက်ထုတ်လုိုက်ပြီဆုိုပြီး အရှေ့အလယ်ပုိုင်းတုိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (ရလခ)က (SSPP/SSA) ဆီ တယ်လီဖုန်းနဲ့ အကြောင်းကြားလာတယ်လုို့ သတင်းတရပ်တော့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်တုိုက် တယ်ဆုိုတာဟာ နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်က ညွန်ကြားချက်မရှိပဲ ရှေ့တန်းတပ်တွေက သူ့သဘောနဲ့သူ သွားတုိုက်လုို့ ရတာမျီုး မဟုတ်ပါ။ ညွန်ကြားချက်ထုတ်မယ်ဆုိုရင် နေပြည်တော် စစ်ရုံးချုပ်ကပဲ ထုတ်ရမှာပေ့ါ။
ဒီအတွက် စစ်ရုံးချုပ် တာဝန်ရှိသူတွေ ဘယ်လုိုစဉ်းစားထားသလဲ၊ အစိုးရဖက်က ဘာတွေညွှန်ကြားဖုို့ရှိ သလဲ။ အစိုး ရအသစ်တက်လာရင်ကော ဒီကိစ္စကို ဘယ်လုိုဖြေရှင်းမှာလဲ။ ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေးနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဌာန ၃ နေရာအပြင် ကာ-လုံ မှာပါ အဓိကနေရာကနေ ကြိုးကုိုင်ထာသူ တပ်-ချုပ်ကုို အစိုးရအသစ်က စစ်ပွဲတွေရပ် အောင် ညွှန်ကြားချက်ပေးနုိုင်စွမ်းရှိပါ့မလားဆုိုတာဟာ ဒီနေ့ မေးစရာဖြစ် လာနေပါတယ်။
အစိုးရအသစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရှေ့ခရီး
လက်ရှိသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကတိပေးထားတဲ့အတုိုင်း ချောမွေ့စွာ အာဏာလွဲပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့ ရင်တောင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လအစောပုိုင်းအထိ အစုိုးရသစ်လက်ထဲ အာဏာရောက်ဦးမည်မဟုတ်သေးပါ။ ဆုိုတော့ ဒီကြား ကာလ ၃ လလောက်အတွင်း စစ်ပွဲတွေက ဒီလုိုဆက်ဖြစ်နေမှာလား၊ ဒုက္ခသည်တွေလည်း ဒီလုိုပဲ ဆက်ပြေးနေရဦး မှာလား။ နုိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒီတုိုင်းပဲ ထုိုင်စောင့်နေကြတော့မှာလား။
(ဓာတ်ပုံ- Eleven Media)
သေချာတာတခုကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်နေရာ ၈၀ ရာခုိုင်နှုန်းအထိအနုိုင်ရတဲ့အတွက် ဘယ်ပါတီနဲ့မှမဟာမိတ်လုပ်စရာမလုိုပဲ၊ အထူးသဖြင့် နုိုင်ငံရေးဖေ၀န်သူတချို့ ထောက်ပြနေတဲ့ တုိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တောင် မဟာမိတ်ဖွဲ့စရာမလုိုပဲ တပါတီ တည်းနဲ့ အစိုးရဖွဲ့နုိုင်တဲ့ အနေအထားရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလုို အခွင့်အရေးရသွားတဲ့အတွက် အားကောင်းတဲ့အစုိုးရတရပ် ပေါ်လာတော့မယ်ဆုိုတာ သံသယရှိစရာ မလုိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအစိုးရက အခုဖြစ်နေတဲ့ တုိုက်ပွဲတွေရပ်သွားအောင်၊ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ဆောင်ရွက်နုိုင်ပါ့မလားဆုိုတာကတော့ မသေချာလှပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကုိုယ်စားပြုကော်မီတီ CRPP မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ NLD နဲ့အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ တဲ့ SNLD ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမုိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လုိုပါတီမျိုးနဲ့ ပူးတွဲဆောင်ရွက်နုိုင်မှသာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ပုိုတွင်ကျယ်လိမ့်မယ်လို့ စာရေးသူကမြင်ပါ တယ်။
ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာ တုိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ မဟာမိတ်မဖွဲ့နုိုင်ပဲ၊ သူနုိုင်ကုိုယ်နုိုင် အပြိုင်ကျဲခဲ့ တာကို ထားလုိုက်ပါတော့။ အခု ရွေးကောက်ပွဲပြီးချိန်မှာတော့ ရှမ်းနဲ့ ရခုိုင်အပါအ၀င် တချိန်က CRPP မှာ ပူးတွဲရပ်ခံခဲ့တဲ့ မဟာမိတ်ပါတီတွေ၊ အခြားအသစ်ပေါ်လာတဲ့၊ ဖက်ဒရယ်မူကို ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ တုိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ မဟာမိတ်အဖြစ် ပူးတွဲဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကုို အားကောင်းလာစေနုိုင်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ အစိုးရနဲ့ MPC က သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ဆက်လုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း အသေ အချာ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီး လုိုအပ်တာတွေပြန်ပြင်ဖုို့၊ အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရစေဖုို့ အစိုးရသစ်ဖွဲ့မဲ့ပါတီက စတင်ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်မူနဲ့ တုိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးအပေါ် ပါတီရဲ့မူဝါဒ၊ အစိုးရသစ်ရဲ့ မူဝါဒတွေကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပြိး အားလုံးနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖုို့ ဖိတ်ခေါ်သင့်ပါတယ်။
ဒါတွေက နောက်ထပ် ၃ လလောက်ကြာမှဖြစ်လာနုိုင်တဲ့အလားအလာတွေပါ။ အခုလောလောဆယ် မှာတော့ အာဏာမရသေးတဲ့အတွက် စစ်ပွဲရပ်သွားအောင် NLD ပါတီဖက်က လုပ်ပေးနုိုင်မဲ့ အလားအလာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒါဖြင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ ဒေသခံလူထုတွေကကော ဘာများလုပ်ပေးနုိုင်မလဲ။ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် တစုံတရာ အကူအညီမပေးနုိုင်ကြတော့ဘူးလား။
ရှမ်းပြည်ဖက်က ထွက်လာတဲ့သတင်းတပုဒ်အရ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီနုိုင်ရေးအတွက် ရှမ်းလူငယ်တွေက ဦးစီးပြီး မြို့တော် တောင်ကြီးနဲ့ အခြားမြို့တွေမှာ ရံပုံငွေရှာဂီတပွဲတွေ၊ ဈေးရောင်းပွဲတွေကျင်းပနေကြောင်း သိရပါတယ်။ ကယာပြည်နယ်ဖက်က သတင်းတပုဒ်မှာတော့ ကရင်နီကျောင်းသားသမဂ္ဂက ဦးဆောင်ပြီး စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ရံပုံငွေကောက်ခံပွဲတခု မြို့တော် လွိုင်ကော်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်က ပြည်လမ်းပေါ်မှာလည်း ရှမ်း အမျိုးသမီးတစုက စစ်ရပ်စဲရေးဆုိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီး စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ အတွက် အလှူခံနေတာကုိုတွေ့ရပါတယ်။
တခါ အိမ်နီးချင်း ထုိုင်းနုိုင်ငံဖက်ကရတဲ့ သတင်းတခုထဲမှာတော့ ထုိုင်းနုိုင်ငံရောက် ရှမ်းတုိုင်းရင်းသားတွေ ဦးဆောင် ပြီး စစ်ရပ်စဲရေး တာင်းဆုိုဆန္ဒပြပွဲတရပ်ကုို ဘန်ကောက်မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ကျင်းပနုိုင်ဖုို့ပြင် ဆင်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒါဖြင့် နုိုင်ငံတကာရောက် ရှမ်းတုိုင်းရင်းသားတွေအပါဝင် မြန်မာနုိုင်ငံသားတွေကကော စစ်ရပ်စဲအောင် ဘာလုပ်ပေး နုိုင်ကြမလဲ၊ ပြည်တွင်းရှိ တခြား ပြည်နယ်-တုိုင်းအသီးသီးက လူထုတွေကကော စစ်ရပ်စဲရေး၊ ဒုက္ခသည်တွေကုို ကူညီနုိုင်ရေးအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးနုိုင်မလဲ။
တကယ်တော့ ဒီမုိုကရေစီစနစ်ဆုိုတာဟာ အစုိုးရကလုပ်ပေးတာကုိုပဲ အများပြည်သူက ထုိုင်စောင့်နေတဲ့ အနေအထားမျိုး မဟုတ်ပါ။ အများပြည်သူ ဆန္ဒအတုိုင်း အစိုးရဖက်ကလုိုက်လုပ်လာအောင် နုိုင်ငံသားတွေ ဖက်ကလည်း အစိုးရကုို ဖိအားပေးတုိုက်တွန်းဖုို့ တာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်ပါလား။ ။
၂၀၁၅ ခွာစစ်ဖြင့် နုိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုသစ်ကုို စတင်ပါ
ခွာတိုက်ခြင်း၊ ပူးတုိုက်ခြင်းနှင့် ဗျုဟာမဲ့ အနာဂတ်